အချိုစားခြင်းကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ » အချိုစားခြင်းကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်း
လူအများစုသည် အချိုကြိုက်တတ်ကြသည်။ ချိုသောအရာမှန်သမျှစွဲစွဲလမ်းလမ်းရှိကြသည်။ ချိုသောအစားအစာများသည် အရသာရှိ၍စွဲဆောင်မှုရှိသည်မှန်သော်လည်း သွားပိုးစားခြင်းကဲ့သို့ သာမန်ကျန်းမာရေးပြဿနာများမှသည် အ၀လွန်ခြင်း ၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါတို့အထိနာတာရှည်ရောဂါများကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိုစားသုံးခြင်းကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်လာပေသည်။
-အကျင့်တစ်ခုကိုဖျောက်ဖျက်ရသည်မှာသိပ်တော့မလွယ်ကူလှပါ။ အချိန် ၊ အားစိုက်ထုတ်မှု ၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု နှင့် အခြားသူများ၏ကူညီမှုလည်းလိုအပ်သည်။ သို့သော်လည်းကံကောင်းသည်မှာအကူအညီဖြစ်မည့်နည်းလမ်းများရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
-အသုံးပြုသင့်သည့်နည်းလမ်းမှာ ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အချိုကိုရုတ်တရက်ဖြတ်ပစ်ရန်မလိုပါ။ နေ့စဉ်အသုံးပြုသောသကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချသွားရန်ဖြစ်သည်။
-အချိုကြိုက်သောသင်၏သွားများအတွက် သကြားလုံးနှင့် ကွတ်ကီးများစားမည့်အစားချိုသောအသီးအနှံများ ၊ ဘယ်ရီသီးများ၊ စွံပလွန်သီး ၊ စပျစ်သီးခြောက် စသည်တို့ကိုစားပါ။ ထိုအစားအစာများတွင်လည်းအချိုဓာတ်ပါသည်မှန်သော်လည်းကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သည့် ဗီတာမင် ၊ အမျှင်ဓာတ် နှင့် အာဟာရဓာတ်များပါ တစ်ခါတည်းရရှိနိုင်သည်။ ထို့ပြင် အချိုစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကသကြားမပါသောအစားအစာ
-နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာနှင့် ညစာကိုသူ့အချိန်နှင့် သူစားပါ။ ထမင်းအနပ်များကိုသေချာစွာစားပါက ဗိုက်ဝပြီး အချိုစားချင်စိတ် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ပြင် သားရေစာ စားခြင်းကိုလည်းရှောင်ပါ။ သို့သော် အချိုစားချင်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ပါကကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောအဆီဓာတ်နှင့် အချိုဓာတ်ပါသောအစားအစာများ (ဥပမာ – ထောပတ် ၊ အစေ့အဆန်၊ထောပတ်သီး)တို့ကိုပါရော၍ စားသုံးပေးပါ။ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဗိုက်ပြည့်ပြီး အချိန်မကြာခဏ
-အစားအစာတစ်ခုကို မ၀ယ်ယူမီ ပါဝင်သောပစ္စည်းများကို ဖတ်ရှု၍ သကြားဓာတ်ပါ၊ မပါစစ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သကြားကိုမတော်တဆစားမိခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မည်။
-အချိုနှင့်တွဲဖက်၍စားသုံးပါကအချဉ်ဖောက် ထားသောအစားအစာများတွင်ပါရှိသည့် လူကိုအကျိုးပြူသော အဏုဇီဝပိုးလေးများသည်အချိုစားချင်စိတ်ကို လျှော့ချပြီးအချိုဓာတ်၏မကောင်းသော အကျိုးဆက်များကိုလည်းလျှော့နည်းစေသည်။
ခရိုမီယမ်ဓာတ် ( Chromium ) ဓာတ်ပါအောင်စားပါ
-ခရိုမီယမ်ဓာတ်သည် သွေးတွင်းသကြားပမာဏကိုတည်ငြိမ်စေခြင်း ၊ သကြားဓာတ်သုံးစွဲမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် အချိုဓာတ်စားသုံးလိုစိတ်ကို လျှော့ချပေးခြင်းစသည့်
-ကြားဓာတ်အလွန်အမင်းစားသုံးခြင်းက လူ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်မှသာကျန်းမာမည်ဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်တစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်ရန် မလွယ်ကူသည်မှန်သော်လည်းဆုလဒ်အနေဖြင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
Kick Your Sugar Addiction in9Steps. http://www.runnersworld.com/run-faster/kick- your-sugar- addiction-in-9-stepsAccessed January 11, 2017
Sweet Poison – Kicking Your Sugar Addictionhttps://www.womentowomen.com/nutrition/sweet-poison-kicking-your- sugar-addiction/Accessed January 11, 2017
The Lazy Girl’s Guide to KickingaSugar Habit. http://www.womenshealthmag.com/food/how-to- stop-eating-sugarAccessed January 11, 2017